“Dirigeants Sportifs”: sambany nandray anjara ny taranja aviron - ewa.mg
“Dirigeants Sportifs”: sambany nandray anjara ny taranja aviron
News - “Dirigeants Sportifs”: sambany nandray anjara ny taranja aviron
Nifarana, ny alakamisy lasa teo,
ilay fampiofanana ho an’ny mpitantana fanatanjahantena,
karakarain’ny Komity olympika malagasy. Fampiofanana andiany
faharoa ho an’Antananarivo, amin’ity taona 2020 ity. Toy ny
mahazatra, 25 mianadahy ireo mpiofana ny nahavita fiofanana ka
nahazo mari-pankasitrahana. Mpitantana fanatanjahantena avy amin’ny
sehatra sy ny taranja samy hafa izy ireo fa sambany kosa nanana
solontena ny avy amin’ny taranja aviron. Ny filohan’ny kaomisiona
ny mpitsara sy ny filohan’ny komisiona ny fitsipika sy ny
fifampifehezana avy eo anivon’ny federasiona malagasy ny aviron ny
nandray anjara tamin’izany. Nitondra zava-baovao ho azy ireo ny
fiofanana, indrindra amin’ny maha mbola taranja an-dalam-pivoarana
ity taranja ity eto Madagasikara. Nanome toky ireo mpiofana fa tsy
handraraka ilo mby an-doha ny fahalalana noraisina nandritra ny
efatra andro ary hampihatra izany any amin’ny sehatra misy azy
Mbola manana vina hanohy ny
fampiofanana any amin’ny faritra ny Komity olympika malagasy,
amin’ity taona 2020 ity, ka hotaterina eto hatrany ny
fanampim-baovao mahakasika izay.
L’article “Dirigeants Sportifs”: sambany nandray anjara ny taranja aviron a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 14/11/2020
Ecole d’Etat-Major: nivoaka ny andiany faha-15
“Maro ireo ambana sedraina amin’ny asa fampandriana fahalemana ilàna paikady manokana. Tsy tokony ho ny miaramila no matahotra dahalo fa ny dahalo no matahotra miaramila. Ny dahalo anefa, tsy fahavalo fa mpifanandrina amin’ny vahoaka, olom-pirenena ary ao anatin’izany zava-misy izany ny hampiharana ny rafitr’asa vaovao avy amin’ny fiofanana eo anivon’ny Etat major”, hoy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), ny Jly Rakotonirina Léon Richard, nandritra ny famoahana amin’ny fomba ofisialy ny andiany faha-15 ny sekoly ambony manofana manamboninahitra zokiny, omaly teny amin’ny Cemes Soanierana. Miisa 12 mirahalahy ireto navoakan’ny Sekoly ambony manofana manamboninahitra zoky eo anivon’ny Tafika malagasy na ny ecole d’Etat-Major eny Fiadanana. Nisy ny lanonana ara-miaramila nanolorana azy ireo ny mari-pahaizana “diplôme de l’Etat-Major”, natao teo ambany fiahian’ny MDN, ny Jly Rakotonirina Léon Richard, ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika malagasy, ny Jly Rakotonirina Théophile, notronin’ireo manamboninahitra ambony eo anivon’ny fianakaviamben’ny Foloalindahy malagasy. Nandritra ity fotoana ity koa, nisy famindrana ny fanevan’ny sekoly teo amin’ny talen’ny sekoly teo aloha, ny Jly Rakotoarijaona Josoa, sy ny tale mpandimby azy, ny Jly Razafitombo Maminirina. Nanamafy ny MDN fa amin’ny taona 2020, tsy maintsy miofana eo anivon’ny sekoly avokoa ireo manamboninahitra ambony ary tsy maintsy arahina sivana hatrany ny fidirana amin’izany.Jean ClaudeL’article Ecole d’Etat-Major: nivoaka ny andiany faha-15 a été récupéré chez Newsmada.
ÛMMI MADAGASCAR: Manomboka ny sabotsy 25 aprily 2020 ny Ramadany
Tsy hita ny volana omaly alakamisy 23 aprily 2020 ka noho izany dia sabotsy 25 aprily 2020 ny voalohany ny volana masina Ramadany. Manoloana ity valanaretina coronavirus ity dia misy fiovana ny fanao isan-taona, fiatrehana ny volana masina Ramadany, araka ny fanambarany nataon’ny filohan’ny ÛMMI Madagascar, Sheikh Rijaly. “Raha hatrizay nisy hetsika maro isan-karazany toy ny fiaraha-mivavaka, fampianarana, fanaovana asa sosialy, fiaraha-mivavaka amin’ny alina, fiaraha-misakafo dia hisy fiovana izany. Na dia eo aza ny nanome karazana ampahana fahafahana ny fitondram-panjakana, 15 andro fahatelo afaka mivorivory raha latsaky ny 50. Nohamafisin’i Sheikh Rijaly fa anisany tombony lehibe ho an’ity tsimokaretina ity ny fifangaroana ka noho izany dia vavaka isan-tokantrano hoy izy no atao fa andian’olona vitsivitsy, mety mifandimby no afaka manao fiaraha-mivavaka rehefa tsy maintsy atao izany. Miarahaba ny olombelona rehetra tsy an-kanavaka ny tratran’izao asaramanitra izao ny tenany ary “mirary ramadany sambatra ho antsika rehetra ary enga anie samy ho tahian’i Tsitoha, samy hahavita ny adidintsika antsakany sy andavany mandritra izany volana masina ramadany izany ary mirary ho an’ny firenentsika hivoaka mpandresy amin’ny valanaretina COVID 19”. Nirina R. Cet article ÛMMI MADAGASCAR: Manomboka ny sabotsy 25 aprily 2020 ny Ramadany est apparu en premier sur déliremadagascar.
Volley Ball: mitady mpilalao lava, ny GNVB
Araka ny efa fantatra, manomboka miverina amin’ny fanazarantena avokoa ny ekipa sy ny atleta manerana ny Nosy, isan’izany ny ekipan’ny GNVB (Gendarmerie nationale de volley ball). Ao anatin’izay indrindra, ho fampitomboana ny lenta sy hanomanana bebe kokoa ny ekipa amin’ny fifaninanana goavana hatrehina, mitady ankizy lava handrafitra ny ekipany ny filohan’ny GNVB, ny kolonely Rakotomalala Heriniaina. Somary lava ity fiatoana vokatry ny Coronavirus ity, raha ny nambarany, ka tena ilana ezaka goavana ny famerenana ny lentan’ny ekipa. Izany indrindra no tsy maintsy hirosoana amin’ny fitadiavana ankizy lava.Raha ny fanazavana hatrany, efa nanomboka niverina nikotrana, ny alatsinainy lasa teo, ny ekipan’ny volley ball ary mifantoka tanteraka amin’ny fanomanantena mafy. Nambaran’ity filohan’ny GNVB ity fa mila manao “revanche” mafy isika, taorian’ny faheresena azon’ny GNVB nanoloana an’ny Reonioney, nandritra ny “CCZone 7” farany teo iny. Fifaninanana notontosaina teto amintsika ny volana febroary lasa teo. Mba ho fampiakarana ny lentan’ny fifaninanana fotsiny ihany ny nandraisan’ny La Réunion Ankara nandritra izany fa tsy ao anatin’ny faritra faha-7 izy. Izany hoe, ny GNVB ihany ny nahazo ny amboara, hisolo tena ny faritra faha-7, na laharana faharoa aza. Mi.RazL’article Volley Ball: mitady mpilalao lava, ny GNVB a été récupéré chez Newsmada.
Amboasary Atsimo : dahalo roa maty rotiky ny balan’ny polisy
Dahalo roa indray maty voatifitra nandritra ny fifandonan’ny polisy (CSP Am­bo­a­sary) sy ny dahalo tao Amboasary Atsimo, ny alarobia alina teo rehefa avy nanafika. Niditra an-keriny tao amina tokantranona vehivavy iray ny jiolahy miisa fito ni­rongo basy. Lasan’ireo mpanafika ny fananan’ny tompon-trano rehetra hatramin’ny vilany sy vola 350 000Ar. Olona teo amin’ny manodidina no nampandre ny polisy ka raikitra ny fanarahan-dia, izay niafara tamin’ny fifampitifirana. Vokany, lavo ny jiolahy roa raha tafaporitsaka ireo namany.Jean ClaudeL’article Amboasary Atsimo : dahalo roa maty rotiky ny balan’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Alakamisy Ambohimaha : Tovovavy mpivarotra maty voatsatoka antsy tao an-tsena
Habibiana nataon’ny mpangalatra! Tovovavy iray 24 taona no maty notsatohan’ny jiolahy ny antsy teo an-tsena, tany Alakamisy Ambohimaha, omaly tokony ho tamin’ny 1 ora antoandro. Araka ny fanazavana, nisy jiolahy mpangalatra nifaoka ny satroka iray fonosana miisa 30, izay anisan’ny entana namidin’ity vehivavy mpivarotra ity. Nanenjika izy noho izany ka tratrany ity mpangalatra, saingy namoaka antsy ilay jiolahy, ary nolerany ilay tovovavy. Tsy afa-niala moa izy io ka voatsindron’ilay antsy, ka nijininika ny rà. Ny entana nangalarina kosa natsipin’ilay mpangalatra, ary avy hatrany dia nirifatra nitsoaka izy. Vokatry ny faheverezan-drà be loatra dia tsy tana ny ain’ilay mpivarotra. Mandeha ny fikarohana ilay tovolahy mpangalatra sady nahavanon-doza. Efa mandray andraikitra rahateo ny mpitandro filaminana momba ity raharaha ity. Yv Sam L’article Alakamisy Ambohimaha : Tovovavy mpivarotra maty voatsatoka antsy tao an-tsena est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Alakamisy Ambohimaha : Tovovavy mpivarotra maty voatsatoka antsy tao an-tsena a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fandaminana sy fandrindrana asa: ilana karnem-pokontany eny amin’ny biraom-panjakana
Anisan’ny nivoitra tamin’ny filankevitry ny minisitra, ny 13 janoary teo ny tsy maintsy hananan’ny tokantrano tsirairay manerana ny Nosy ny karinem-pokontany. Tafiditra amin’ny fanatsarana ny fomba fiasa izany.“Ilaina izany rehefa manao raharaha ara-panjakana hahafahana mandrindra sy mandamina ary mamaly ny filàn’ny mponina, indrindra eny amin’ny biraom-panjakana”, hoy ny tatitry ny filankevitry ny minisitra. Hisy fokontany hatao filamatra “pilotes” hanombohana azy eto Antananarivo Renivohitra ary hivoaka mialoha ny faran’ny volana ny ampahany amin’ny karinem-pokontany vaovao.Fanokafana ny taom-pambolen-kazo 2021Fiaraha-miasa eo anivon’ny sampan-draharaha eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika (PREA), ny kaominina sy ny minisiteran’ny Atitany ary ireo minisitera isan-tokony, nifandrimbona nanao ny fanisana isan-tokantrano ny tamin’ny taona lasa no hoentina manatanteraka izany.Ankoatra izany, hatao any Taolagnaro ny fanokafana ny taom-pambolenkazo 2021ka hotanterahina ny 19 janoary izao. Hatao amin’io fotoana io koa ny Andron’ny fambolen-kazo any an-tsekoly na ny « Journée de reboisement scolaire » manerana ny Nosy. Lohahevitra amin’izany : « Mamboly hazo tia tanindrazana, mandoro ala mandoro tanindrazana ».Nahemotra ny fampahafantarana ny PEMNoho io hetsika iray lehibe io indrindra, nahemotra andro vitsivitsy ny fampahafantarana ho an’ny rehetra ny fandaharanasa PEM (Plan Emergence de Madagascar), tokony hatao ny 19 janoary 2021 ho avy izao. “Noho ny fandaminana isan-karazany sy ny maha zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana ka hanokafana amin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolenkazo 2021 any Tolagnaro amin’io andro io no antony”, hoy hatrany ny eo anivon’ny filankevitry ny minisitra.Synèse R.Natsangana eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, araka ny filankevitry ny minisitra ny rafitra hanara-maso sy hanenjehana ireo mpanao hosoka « Agence nationale anti-fraude – Anaf ». natao izany mba hanaraha-maso ireo hosoka sy hanenjehana ireo mpanao hosoka araka ny voafaritra ao anatin’ny lalàna. « Hanao ny fanadihadiana rehetra manodidina ireo hosoka rehetra ny Anaf, ary hiara-kiasa akaiky amin’ireo sampan-draharaham-panjakana mahefa mpampihatra ny lalàna», hoy ny tatitra.L’article Fandaminana sy fandrindrana asa: ilana karnem-pokontany eny amin’ny biraom-panjakana a été récupéré chez Newsmada.
Misaona ny fianakaviamben’ny Foloalindahy: nodimandry ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika ana habakabaka
Fanamarihana tsotsotra ihany ny nentin’ny Foloalindahy nankalaza ny Andron’ny manamboninahitra omaly. Ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, nisy ny fanolorana ny gisa ho an’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard. Nanamafy ny fijoroana hatrany ho tandroka aron’ny vozona hiaro ny vahoaka sy ny fananany ho fitsinjovana ny tombontsoa ambonin’ny firenena, araka ny nambarany. Miarahaba ny manamboninahitry ny Foloalindahy rehetra manerana an’i Madagasikara izy sady nanamafy fa ny andro toy izao izay manamarika ny asa rehetra efa notanterahina ary mbola hotanterahina eo amin’ny fanovana ny rafitry ny Tafika. Nitondra ny teny fampiononana ho an’ny fianakaviana sy ny fankaherezana ho an’ny Foloalindahy amin’izao fahabangana misy eo amin’ny Tafika ana habakabaka izao noho ny fahalasanan’ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika ana habakabaka, ny Jly Radona Ratiarivelo Ellis. Nambarany fa olona miavaka ary anisan’ny andry iankinan’ny fitondrana ny fanovana ny rafitry ny Tafika ana habakabaka.Jean ClaudeL’article Misaona ny fianakaviamben’ny Foloalindahy: nodimandry ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika ana habakabaka a été récupéré chez Newsmada.
Famotorana momba ny fahafatesana :: Miantso fanampiana amin’ny fitsarana frantsay ny havan’ilay Karàna
« Novonoina ny havanay ». Io no fehin’ny tenin’ireo fianakavian’i Danil Radjan, ilay lehilahy karàna hita faty nihantona tetsy Ivandry, tamin’ny sabotsy 19 septambra lasa teo. Mahatoky ny mpitandro filaminana malagasy, polisy sy zandary, izy ireo amin’ny famotorana, saingy amin’ny maha mpizaka ny zom-pirenena frantsay an’itsy niharam-boina kosa dia miantso ny fitsarana frantsay hanome tanana ny mpanao famotorana ihany koa ireo havany. Misoko mangina ny famotorana ataon’ny polisy misahana ny heloka bevava na BC eny Ampefiloha momba an’ity tranga nahafatesana olona ity. « Manaitra ny tompon’andraikitra izahay mba hanamafy kokoa ny fanadihadiana. Vonona izahay hiara-hiasa hanome tanana amin’ny polisy sy ny zandarimaria. Efa nisy ny fijoroana vavolombelona nataon’ny vondron’ny Karàna mizaka ny zom-pirenena frantsay na « CFOIM ». Novonoina tamin’ny fomba feno herisetra ny havanay », hoy ny fianakaviana Radjan. Isan’ireo noenjehina noho ny raharaha fanapoahana baomba teny Tsaralalàna i Danil Radjan sy ny rahalahiny Moustapha Radjan, tamin’ny taona 2014. « Manahy ny amin’ny mety fisian’ny lonilony tamin’ny fanenjehana azy sy ny rahalahiny izahay. Efa voarohirohy ho nanondrana volamena sy nanodinkodimbola ihany koa izy ireo. Afaka ihany anefa izy ireo tamin’ireny fiampangana ireny. Tsy tongatonga ho azy ny fitifirana an’i Moustapha teny Ambatobe, tamin’ny taona 2017. Mitondra takaitra izy ankehitriny. Mihorohoro izahay satria misy mifofo ny ainay mianakavy », hoy hatrany ny fianakaviana Radjan. L’article Famotorana momba ny fahafatesana :: Miantso fanampiana amin’ny fitsarana frantsay ny havan’ilay Karàna est apparu en premier sur AoRaha.